FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA VALLEY BULLDOG - ALIKA
Roxy the first generasi (F1) Valley Bulldog (Boxer / English Bulldog mix) amin'ny 2 taona
Alika mpiady totohondry / anglisy Bulldog Hybrid misy tsipika vitsivitsy novolena madio
(Bull-Boxer = antsoin'ny klioba hybrid sasany fa hazo fijaliana tsotra amin'ny English Bulldog ho an'ny Boxer)
Ny Valley Bulldog dia mety ho toa ny andiany avo kokoa amin'ny English Bulldog na kinova fohy kokoa an'ny a mpanao ady totohondry . Na inona izany na inona, ity karazana alika ity dia manana hozatra, mafy orina, loha malalaka, tendany matevina ary faritra be tratra sy soroka. Boribory ny maso ary ny tsoka dia atositosika ao anaty toy ny Bulldog anglisy na mipoitra somary mitovy amin'ny Boxer. Ny sofina dia voninkazo na bokotra. Ny tongotra dia matevina sy matanjaka. Izy io dia mety manana stump fohy, fohy na rambony kely volo. Ny loko dia misy brindles isan-karazany, fotsy misy brindle na fangaro amin'ny brindle, mainty, fotsy, tan, fawn na mena. Ny lohasahan'i Bulldogs dia manana nify sy valanoranom-po mahery vaika ary mety misy manaikitra kely na mahery vaika.
Ny Valley Bulldog dia manana toetra tsara ary rehefa mifanerasera tsara, miaraka amin'ny tompona izay mahatakatra ny fomba a mpitarika fonosana , afaka mifanaraka amin'ny karazana alika sy olombelona hafa rehetra (olon-dehibe sy ankizy). Mety ho tony sy malefaka ary mihetsika tampoka ary milalao. Izy io dia tia milomano ary tia ny manakaiky ny tompony. Valley Bulldogs dia manan-tsaina ary azo ampianarina zavatra maro mora foana. Manao mpiambina tsara ao an-trano izy ireo ary hivoaka amin'ny feo tsy fantany. Tian'izy ireo ny mandeha fiara mandeha anaty fiara! Alika matanjaka be io. Toy ny karazana mastiff rehetra, ny Valley Bulldog dia tokony hanana tompony manjaka iza no afaka manome fanatanjahan-tena ampy . Izay afaka manome ny alika ny lalàna tsy maintsy manaraka ary ny fitarihana ilainy ho azy mijanona mandanjalanja, mba hialana amin'ny misy fihetsika tsy ilaina .
Hahavony: 12 - 25 santimetatra (31 - 64 cm)
Lanja: 50 - 125 pounds (23 - 57 kg)
16 - 25 santimetatra ny halavany, tendany 18 - 24 santimetatra.
Mila jerena tokoa ny fitazonana ny hoditry ny tarehy ho madio sy maina, ary koa ny vatan'ny hoditra ao amin'ny faritry ny rambony. Ireo faritra ireo dia mora voan'ny aretina raha tsy diovina isan'andro. Toa manana fironana mahazo ny fahasosoran'ny hoditra sy ny fiasan'ny allergy izy ireo. Ny Bulldog Valley be loatra dia mety ho olana raha tsy arahi-maso tsara ny sakafony. Ny Valley Bulldogs sasany dia mety manana olana amin'ny fifohana rivotra, arakaraka ny fanosehana ny fofona. Indraindray izy ireo dia mievoka ary mety somary mandehandeha indraindray. Ny Drool dia matetika tsy olana raha tsy hoe alohan'ny hainandro be loatra ilay alika na raha miandry fitsaboana manokana izy.
Ny Valley Bulldog dia tsy mila toerana malalaka ao an-trano satria tsy karazany lehibe izy io. Afaka manao tsara izany ao amin'ny trano fandraisam-bahiny na condo. Na izany aza, dia mihetsika be ao anaty trano izy io indraindray. Ho tonga maratra kely indraindray ary handeha amin'ny fihoaram-pefy kely, mihodina manodidina ny trano toy ny adala. Tsy maninona izay haben'ny tranonao fa mbola hataony. Haharitra minitra vitsy monja ny fitroarana, koa miala amin'ny lalana ary avelao ny alika hihazakazaka. Tena mampihomehy ny mijery azy. Ireo alika ireo dia tsy tokony avela any ivelany amin'ny hatsiaka na hafanana be loatra. Tokony hatory ao an-trano izy ireo.
Ny Valley Bulldog dia mila fanatanjahan-tena isan'andro, izay misy haingam-pandeha, mandeha lavitra . Alika mpanao fanatanjahan-tena tokoa izy ireo satria manana Boxer ao anatiny, na izany aza, aza adino fa manana Bulldog Anglisy ao anatiny ihany koa izy ireo, ka ny sasany mety ho somary mikorontana. Afaka mihazakazaka toy ny serfa izy ireo, na izany aza, rehefa mila miadana izy ireo, tsy izany no zavatra mahafinaritra indrindra. Mitovy amin'ny tanky afaka mandeha amin'ny hafainganam-pandeha izy io. Tian'izy ireo ny kilalao siligao tsara sy azo antoka ho azy ireo ary toerana hitsoahana maimaim-poana any amin'ny faritra azo antoka. Tena chewers mahery izy ireo, ka kilalao henjana sy mateza no ilaina.
Ny palitao malefaka sy malama dia misy volony fohy izay mora karakaraina. Ny Valley Bulldog dia mila borosina na kosehina indraindray, ary angamba kosehina lamba lena. Tsy mitaky fandroana matetika loatra izy ireo, raha tsy hoe maloto be. Ny hoditry ny hoditra amin'ny tarehy, rambo, kibo ary ny faritra maha-lahy na vavy (an'ny vehivavy) dia tokony hadio sy ho maina isan'andro. Alao antoka fa maina daholo ireo faritra ireo aorian'ny fitsangatsanganana amin'ny orana na amin'ny fandroana, raha tsy izany dia ho voan'ny virus izy ireo. Ny Valley Bulldog dia mpandroba antonony.
Ny Valley Bulldog dia voalaza fa tany Annapolis Valley, Nova Scotia, Canada, no nanomezana azy ny anarana hoe 'Valley Bulldog.' Ny tsipika misy azy dia ny mpanao ady totohondry ary ny Olde English Bulldogge na English Bulldog ary azo zahana hatramin'ny tapaky ny taona 1900. Malaza manodidina ny faritra Nova Scotia, Canada, io. Ny tsipika Valley Bulldog sasany dia mipoitra madio amin'ny endrika sy karazany, raha ny mpiompy hafa kosa dia miompy fiampitana Boxer-to-Bulldog tsotra ary miantso azy ireo hoe Bulldogs Valley. Ny ACHC sy ny DDKC, na izany aza, niantso ny Boxer niaraka tamin'i Bulldog ho Bull-Boxer.
'Buck dia taranaka voalohany (f1) Valley Bulldog (Bulldog / Boxer mix). Izy dia eo amin'ny 24 'eo amin'ny malazo sy 80 lbs. ary 2 1/2 taona amin'ity sary ity. Izy no alika be fitiavana sy tsara fitondran-tena indrindra hitako, saingy mety mitongilana kely aho. Tena marani-tsaina koa izy, satria afaka mipetraka, mandry, mihorona, mihozongozona (amin'ny baiko na havanana amin'ny baiko), miteny ary miarina. Raha maheno anao mahazo tsakitsaky izy dia ho avy izy hanao ny fanaony rehetra. Buck dia tandindon'ny alika tsara. '
Buck (boribory ankavia), taranaka voalohany (F1) Valley Bulldog (Bulldog / Boxer mix) miaraka amin'ireo mpiara-monina aminy amin'ny 6 herinandro
Winston dia 60-lb miavonavona. Valley Bulldog avy any Nova Scotia, Kanada, aseho eto amin'ny faha-3 taonany.
Obi the Valley Bulldog amin'ny faha-11 volana— 'Obi no kamboty keliko !! Faly foana ary tia alika sy olona hafa, saingy mety ho mafy loha izy rehefa reraka. '
Chico the Valley Bulldog avy any Nova Scotia
'Big Bubba ity. Izy dia alika kely Valley Bulldog 5 herinandro (English Bulldog / Boxer mix) teraka teto. Manana ny reniny sy ny rainy ary ny zokiny vavy aho. Nozaraiko ity sary ity satria noheveriko fa ohatra mahafinaritra amin'ny hybrid izy. Somary roly-poly izy ary manana toetra mampientanentana. Mijery matetika an'i Cesar Millan aho. Mampihatra ny ankamaroan'ny teknikan'ny fampiofanana azy amin'ny alika 'fonosako' manokana aho. Mino marina aho fa tsy misy izany antsoina hoe alika ratsy izany, tompona tsy mahalala fotsiny. Misy alika 12 ao an-tranonay ary mpikambana ao amin'ny fianakavianay izy rehetra. '
Chico the Valley Bulldog avy any Nova Scotia fony izy mbola kely
Hijery ohatra hafa momba ny Bulldog Valley
Sary Bulldog Valley 1
Sary Bulldog Valley 2
Valley Bulldog sary 3
Sary Bulldog Valley 4
Sary Bulldog Valley 5
black lab german shorthair pointer mix amidy
mixer boxer bull american pit
ny saoka japoney sy ny mix Maltese
ohatrinona ny alika 50 pounds
beagle loko volomboasary sy fotsy